Manery An’i Rouhani Handràra ny Telegram Ireo Hiringiriny, Hiomanana Amin’ny Fifidianana Taona 2017 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2017 3:27 GMT
Nanambara drafitra handrindrana ny fantsona media sosialy manana mpanjohy maherin'ny 5000 ny governemanta iraniana. Amin'ny maha fampiharana tambajotra sosialy lehibe indrindra azy ao Iran, heverina hiantraika mivantana amin'ny Telegram izany.
Nivoaka voalohany tao amin'ny iranhumanrights.org ny dika voalohan'ity lahatsoratra ity ary navoaka eto indray noho ny fiarahamiasa amin'ny Fanentanana Iraisampirenena ho an'ny Zon'Olombelona ao Iran.
Nilaza ny loharanom-baovao akaiky ny Fanentanana Iraisampirenena ho an'ny Zon'Olombelona ao Iran (ICHRI) fa niantso ny filoha Hassan Rouhani ny Mpampanoa lalàna ao Tehran, Abbas Jafari Dowlatabadi, mba hanakanana ny fidirana amin'ny Telegram, fampiharana finday fandefasan-kafatra, alohan'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 19 Mey 2017 ho avy izao.
Mbola hamaly ny fangatahana i Rouhani araka ny filazan'ny loharanom-baovao tamin'ny Fanentanana, saingy nandà tsy hanaraka fanerena mitovy amin'izany avy amin'ireo hiringiriny hanakatonana ny fampiharana malaza, tahaka ny Telegram—izay manana mpiserasera maherin'ny 20 tapitrisa ao Iran—alohan'ny fifidianana Parlemanta sy Antenimieran'ny Manampahaizana manokana ao amin'ny firenena tamin'ny volana Febroary 2016 ny fitondrana notarihany.
Nahafantatra ihany koa ny ICHRI fa hatramin'ny taona 2014, efa niantso ny governemanta Rouhani ny Biraon'ny Mpitarika Faratampony, ny Fitsarana, sy ny Seminera Teolojika Qom ary ny polisy mba hametra na handràra ny fidirana amin'ny Telegram ao anatin'i Iran satria ahafahan'ny mpiserasera mizara votoaty heverin'ireo hiringiriny fa anti-revolisiona, ratsy fitondrantena sy mamely ny ara-pivavahana izany. Amin'ny teny hafa, te handràra ny Telegram izy ireo satria mihevitra fa mahatonga ny fanoherana ara-politika anatiny izany.
“Noteren'ny andrim-panjakana miaramila sy ireo seminera hiringiriny ao [an-tanànan'i] Qom ny Minisiteran'ny Teknolojiam-baovao sy ny Fifandraisana mba hanakana ny fidirana amin'ny Telegram,” araka ny filazan'ny loharanom-baovao tamin'ny Fanentanana tamin'ny volana Jiona 2016. “Saingy na dia teo aza ireo fanerena ireo, dia afaka nandrava ireo tsikera momba ny famelàna ny Iraniana hanana fidirana tsy voasivana amin'ny Telegram sy ny fampiharana fandefasan-kafatra hafa ny filohan'ny fitondrana tony fihetsika Hassan Rouhani.
“Matesa ny Fahalalahana”
Nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 2016, nanambara fanerena fanakatonana fantsona Telegram an'arivony an'ny Iraniana ireo manampahefana ara-pitsarana ary nampiantso olona am-polony tany amin'ny tobin'ny polisy na fitsarana noho izy ireo voalaza fa nandefa votoaty manafintohina, anisan'izany ny sary sy ny vaovao.
Ahafahan'ireo mpiserasera mamorona fantsona sy vondrom-botoaty antserasera mifototra amin'ny maha-mpikambana ny fampiharana.
Tamin'ny 18 Janoary 2017, nilaza ny manampahefam-pitsarana ao amin'ny Faritany Hormozgan ao Iran fa efa nanakatona fantsona efa ho 80 tao amin'ny Telegram izy ireo ary nisambotra olona 32 noho ny fitantanana ireo fantsona ireo ary voalaza fa “manely lainga, manakorontana filaminam-bahoaka, mampisy tahotra sy mampiroborobo fitaovana mitondra fitondran-tena ratsy sy mifanohitra amin'ny kolontsaina. “
Ny filazan'ny manampahefana Iraniana ny hoe votoaty “fitondran-tena ratsy” dia matetika fomba ankolaka hilazana sary vetaveta, saingy amin'ity tranga ity, tsy voafetra amin'ny votoaty ara-nofo ny hetsika fanivanana ataon'ny Repoblika Islamika.
Anisan'ireo hetsika vitsivitsy mety hitarika ny olona ao Iran any am-ponja ny famoahana sarim-behivavy tsy manao hijab manarona volo na miaraka amin'ny lamaody “Tandrefana”, ny fitsikerana ampahibemaso ny mpitarika faratampony, na manao hetsika am-pilaminana manohitra ny fanamelohana ho faty – izay samy mora tontosaina amin'ny alalan'ny fampiasana ny fampiharana media sosialy.
Tamin'ny Desambra 2016, nitaky tamin'ny fomba ofisialy tamin'ireo fantsona Telegram an'ny Iraniana izay manana mpanjohy mihoatra ny 5000 ny Polisy misahana ny Aterineto ao amin'ny firenena (FATA) mba haka fahazoan-dalana alohan'ny 25 Febroary 2017 na hiatrika fitsarana. Napetraka ny rafitra fisoratana anarana amin'ny aterineto mba hanampy ny sampan-draharaham-panjakana amin'ny fanarahamaso ny asan'ireo tompon'ny fantsona Telegram sy ny mpanjohy azy ireo amin'ny alalan'ny famokarana sarintany antsipiriany misy ireo mpiserasera sy ny fikambanana misy azy.
“Tamin'ny fivoriana farany nataon'ny Vaomiera Ambony misahana ny sehatra Antserasera, tapaka ny hevitra fa ireo izay manana fantsom-baovao ao amin'ny media sosialy ka manana mpanjohy maromaro dia tokony haka fahazoan-dalana,” hoy ny minisitry ny fifandraisandavitra notendren'i Rouhani, Mahmoud Vaezi, tamin'ny 5 Desambra 2016.
Ny andro manaraka, novelesin'ny lehiben'ny fampanoavana Mohammad Jafar Montazeri ny Vaomiera sy ny manampahefana hafa noho izy ireo zara raha nanara-maso ny fifanakalozam-baovao tao amin'ny aterineto.
“Matesa ny fahalalahana noho ny fandringanana rehetra entin'izany,” hoy izy tamin'ny 6 Desambra. ” Tsy fahafahana izany (ny aterineto). Io no karazana famatopatorana ratsy indrindra. Miasa ao amin'ity firenena ity ny tambajotra maloto manohitra ny fivavahana satria tsy manao ny asan'izy ireo ny fandrindrana tompon'andraikitra. “
Voafetra sy voasivana loatra ny aterineto sy ny fampiharana media sosialy ao Iran, noho ny fahitan'ireo hiringiriny ao amin'ny governemanta ny endrika fahalalahana an'aterineto rehetra ho loza mitatao amin'ny fahamasinan'ny Repoblika Islamika. Mbola ho hita eo raha hahatohitra ny fanerena ataon'ireo hiringiriny hametra sy handràra ny fidirana amin'ny media sosialy ao Iran alohan'ny fifidianana amin'ny vola Mey i Rouhani, izay hanomboka ny fampielezan-keviny tsy ho ela amin'ny firotsahany hofidiana fanindroany.